Ny alahady 27 oktobra teo no nitranga ny fifanjevoana, tao Ankonabe, kaominina Analavory. Lehilahy iray 30 taona no voalaza fa naka tsy niera io vorona fiompy io. Efa nandositra ihany ity farany fa notanarahan’ireo mponina teo an-tanàna ka tratran’izy telo lahy. Araka ny fampitam-baovaon’ny zandariamariam-pirenena, sorena noho io asa ratsy niharo fandosirana io ireo mpanenjika ka sady nitora-bato. Nanoloana ny hery tsy mitovy sy ny be no ho vitsy, nilavo lefona ilay mpangalatra.
Ny miaramila avy ao amin’ny paositry ny zandarimariam-pirenena ao Analavory no nidina tany ifotony sy nandray an-tanana ny raharaha ka voasambotra tamin’izany ireto telolahy nahavanon-doza ireto. Efa nentina nihazo ny toeram-pitsaboana CSB2 Ankonabe ilay lasibatra ary nanao izay tratry ny heriny ny mpitsabo fa tsy tana ny ainy noho ny daroka sy ny ratra nanjo azy, ny ampitso alatsinainy. Nanipika ny zandary any an-toerana fa fandratrana an-tsitrapo nitarika famoizana aina io tranga io fa tsy fitsaram-bahoaka. Tsy maty teo no ho eo ilay lasibatra ary telolahy fa tsy vahoaka no nanatanteraka ny tora-bato sy ny kapoka.